3-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်ကို | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ Porn ဖြတ် အဆိုပါဆုကြေး Foundation ၏သုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်ကို
လူတိုင်းကိုအခြားသူများစှဲကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီပေးနေအတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲပစ္စုပ္ပန်မှာအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာပင်ကစွဲလမ်းနိုင်အသိအမှတ်မပြုကြဘူး။
ကာကွယ်တားဆီးရေးပြန်လည်နာလန်ထူထက်အများကြီးပိုလွယ်သည်။ အများစုကစွဲနောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းအပြုအမူကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သူတို့နေဆဲသူတို့ဘဝ၏ကျန်များအတွက်စွဲဖြစ်ကြောင်းခံစားရပေမည်။ ဤသည်ကိုရှောင်ရှားရကျိုးနပ်တစ်ခုခုပါပဲ။
အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုကျနော်တို့အကြံပြု ...
အကျိုးကိုစနစ်ကအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းရှောင်ရှားတာကောင်းတယ်ဘယ်လိုလူတွေကိုသင်ပေးပါ။ ပေါ်မှာငါတို့ကဏ္ဍများကိုကြည့်ပါ ဦးနှောက်အခြေခံ.
ဘယ်မှာလိုအပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေး။ (စကော့တလန်) သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံပေးခြင်းမှတဆင့်တစ်ဦး '' အမည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး '' ကို အသုံးပြု. အကူညီရယူပါ။ နောက်ထပ်စိတ်ကူးပြန်လည်နာလန်ထူကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတခြားလူရဲ့စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့အတိတ်စိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်ပါသည်
လူတွေကိုပျော်ရွှင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဘဝကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ပေးပါ။ လူတိုင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောဆိုင်များတွင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်မျှတသောဆုချခြင်းစနစ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကျန်းမာသောလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပညာရေးကိုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်မျှတမှု၊ ထောက်ထားစာနာမှု၊ လေးစားမှု၊
ကာကွယ်ခြင်းထက်ရောဂါပျောက်ကင်း - ကဆေးဝါး-အခမဲ့စျေးပေါဖြစ်ပါသည်
လူတိုင်းကောင်းသောအရည်အသွေး, သက်သေအထောက်အထား-based, ရိုးရိုးသားသားနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဆကျဆံရေးပညာရေးကိုလက်လှမ်းမီရှိသည်ဖို့အတှကျအကျွန်ုပ်တို့၏ရူပါရုံကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးများအတွက်အထိခိုက်မခံဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆင်းရဲသောသူသည်သို့မဟုတ်လုံးဝမလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာပညာရေး၏အကျိုးဆက်များကိုအလေးအနက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သာယာဝပြောရေးအပေါ်ရှိခြင်းသောသက်ရောက်မှုကိုလျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူး။ ဒါဟာလာမည့်သားစဉ်မြေးဆက်အကြားအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာအလေးအနက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
<< TRF အဆင့်သုံးဆင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းပုံစံ